Kabala Qabxii walitti maxxansuu
Kabala Qabxiiwwan walitti maxxansu;
Amaloota qabxii walitti maxxansuu galchi yookin fooyyessi. Qabxii walitti maxxansuu maammiloo walqabsiisaa iddoo sarara wal-qabsiisa wal qabsisuu. Ofumaan LibreOffice qabxii wal-qabsisa handhuura tokkoon tokkoo cinaa marsa reektaangilii wanta hundaaf uumtee olkaa'a.
Qaphxii Dhancaa sajoo Kabala fakkasaa irra jiruu Cuqaasi
Qabxiiwwan walitti Saaguu
Tuqaa cuftii walitti maxxansuu iddoo wantichaatti cuqaastu saagi.
Kallatti Bitaa Keessaa Bahu
Kornyoo tuqaa cuftii filatame fiixee bitaatti walqabsiisa.
Kallattii Irraatti Bahi
Tuqaa cuftii walitti maxxansuu filatame fiixee irraatti wal qabsiisa.
Kallattii Mirgaan Bahi
Walqabsiisaan fiixee mirga tuqaa cuftii maxxansuu filatametti walqabsiisa.
Kallattii Jalaatiin Bahi
Walqabsiisaan fiixee tuqaa cuftii jalatti maxxaansuu filatametti walqabsiisa.
Firooma Qabxii walitti maxxansuu
Iddoo firooma tuqaa cuftii maxxansuu filatamee wayita hangamtaa wanta jijjiirtuu ijaara.
Qabxii walitti maxxansuu Surdaala Bitaa
Wayita wantichi hagamtaan isaa jijjiiramu,qabxiin walitti maxxansuu ammee fiixee bitaa wantichaa jiru akkuma jirutti taa'a.
Qabxii Walitti Maxxansuu Surdala Handhuura.
Wayita wantoota hagamtaan jijjiiramuu tuqaa cuftii maxxansuu ammee akkuma jirutti handhuura wantichaa ta'a.
Qabxii walitti maxxansuu surdaala Mirgaa
Wayita wantichi hagamtaa isaa jijjiiru tuqaa cuftii qabsiisuun ammee fiixee mirga wantichaa akkuma jirutti ta'a.
Qabxii walitti maxxansuu Sarjaa Irraa
Wayita wantichi hagamtaa isaa jijjirame tuqaa cufti maxxaansuun ammee fiixee irraa wantichaatti dhaabbataa ta'a.
Qabxii Walitti maxxansuu Sarjaa Handhuura
Wayita wantichi hagamtaa jijjiiru tuqaa cuftii maaxxansuu wantichaa haandhuura Sarjaaf dhaabbataa ta'ee tura.
Qabxii walitti maxxansuu Sarjaa Jalaa
Wayita wantichi hangamtaan jijjiiramu, tuqaa cuftii maxxansuu ammee fiixee jala wantichaatti dhaabbataa ta'a.
Title is: Kabala Qabxii walitti maxxansuu